News - SWMC E gosiputara Ngwọta Ngwọta Maka BeIFANG QUARRY
SWMC KWES SOLR P AKW SOLKWỌ ​​AKWUTKWỌ maka BEIFANG QUARRY
SWMC, onye na-emepụta igwe mkpọpu ala, n'otu ụzọ ahụ nke na-enye ngwaahịa igwe zuru oke maka ndị ahịa, na-eji ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe ụlọ ọrụ iji nye ihe ngwọta mkpọsa a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ nke igwe na-egwu ala ma na-enyere ndị ahịa aka inweta ihe mgbaru ọsọ injinia. Ọ na-egosi na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị na-emepụta ihe eji egwu mmiri nke Xuanhua SWMC na BEIFANG na-agbachitere abụghị naanị ịnye akụrụngwa. Mgbe ebe BEIFANG na-achọ ngwa ngwa, SWMC nyekwara ọrụ mgbazinye X5A-DTH. BEIFANG na-agbari okwute adịghị mkpa itinye ego buru ibu, nke zọpụtara mmepụta ihe ma belata ihe egwu ntinye. SWMC igwe na-egwu ala nwere ike ịmatakwu mkpa nke beIFANG quarry ma nye azịza bara uru maka mmepe ya n'ọdịnihu.
SWMC na-enye teknụzụ mkpọpu ala na BEIFANG Quarry, nke dị na obodo Chaoyang, mpaghara Liaoning, iji nyere ya aka melite arụmọrụ ọgbụgba ọkụ.
Ntucha a hụrụ na nkume BEIFANG bụ nke kachasị elu ájá. Ebe a na-egwupụta nkume na-ezube igwu ihe banyere 3 nde cubic mita nke nkume ebe a kwa afọ.
Anyị nwere ike iche na ọ bụrụ na anyị egwupu oghere nwere omimi nke 22m na dayameta nke 115mm na hama, a ga-enwe nchepụta doro anya na arụmọrụ mkpọpu ga-ebelata. igwe nke SWMC meputara. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na nnukwu nrụgide submersible impellers, na-arụ ọrụ mgbali ruo 21bar.
Nkume siri ike bụ ihe siri ike F = 8-10. Mgbe anwalere ule ugboro ugboro na okwute ahụ, ekpebiela ịnakwere usoro oghere ahụ nwere oghere nke 140mm na Angle nke ogo 30 site na ntụziaka kwụ ọtọ. N'ụzọ dị otú a, nkwụsi ike nke ụkwụ nwere ike ịka mma, usoro mmegide ahụ nwere ike ịdị n'otu, yana enwere ike belata oke pasent na ihe fọdụrụ.
A na-eji X5A-DTH nke Taiye, onye na-emepụta ihe na-egwu mmiri na Xuanhua, iji meziwanye arụmọrụ.
BEIFANG na-agbari okwute na-ebute n'ihu chọrọ pụrụ iche maka nrụpụta ọrụ. Anyị na-ekwukarị, "ọfụma oghere oghere ka mma, ọgbụgba ọkụ ka mma, na n'ezie, nsonaazụ ya ka mma. N'aka ozo, iwelata ọgbụgba ọkụ nke abụọ nwere ike ịbawanye arụmọrụ.
X5A-DTH drill rig bụ ọrụ zuru oke nke igwe ahụ, nke ejiri ya na nnukwu ikuku ikuku DTH impacter drilling compressor, na-enye BEIFANG quarry bụ 2 igwe zuru oke, n'ihi na enwere oghere, yabụ chọrọ nhazi pụrụ iche nke roba ájá mkpuchi, n'ihi na nke ike nkume, malite ịgba kwesịrị kpọmkwem oke Ntọala.
Dịka ọmụmaatụ, usoro ọdịdị nke ebe a na-agbari ngwa chọrọ nhọpụta nke ngwa ngwa nwere ezé kọlụm ma ọ bụ ngwakọta nke ezé kọlụm na ezé mmiri. Ihe mkpọpu ahụ na-agbagharị n'agbata ọgba aghara 70 na 80 kwa nkeji, na mgbawa nkume ndị na-adịghị ahụ anya. n'okpuru elu nwere ike ime ka oghere ghara ịmalite, ma ọ bụ eriri mkpọpu ahụ adaba na oghere, ma ọ bụ nrụgide daa.
N'ihe banyere imepụta arụmọrụ, maka oghere 22 mita miri, oge mkpọpu ala belatara site na 1 oghere kwa 45min na nkezi nke oghere 1 kwa 30min.